Kananobi Exhibition (yekutanga hafu yegore) Kuchengeta (kutangazve) kweye gallery kutaura | Ota Ward Cultural Promotion Association
About Kana no Mi Exhibition (yekutanga hafu yegore) Kutora (kutangazve) kwevatambi hurukuro vanotaura
202106 / 08(Moto)
Kumagai Tsuneko Chirangaridzo Horo Kananobi Exhibition "Tichifunga nezvenguva yekutanga yevananyanduri venguva yepakati vanoda mwaka mina yeJapan" Garari hurukuro yakatangazve
Mushure mekutora matanho ekudzivirira kupararira kweiyo nyowani coronavirus hutachiona, isu tinogumira huwandu hwevatori vechikamu uye kutangazve hurukuro yegalari seinotevera. June 6th (Sat) uye June 12th (Sat) achaperekedzwa nebhuku raTsuneko Kumagai.Dunhu rekudyidzana chirongwa "Pepa uye calligraphy-kuyerera kweinki, kuyerera kwenguva-"Tichazivisawo mapepa acharatidzirwa pa.
Chivabvu 3, gore rechitatu reReiwa (Zuva) 5:2　Yakadzimwa.
Chivabvu 3, gore rechitatu reReiwa (Zuva) 5:2 Yakadzimwa.
Mugovera, Kukadzi 3, gore rechitatu reReiwa 5:22　Yakadzimwa.
Mugovera, Kukadzi 3, gore rechitatu reReiwa 6:12　終了しました。
Mugovera, Kukadzi 3, gore rechitatu reReiwa 6:26
Vanhu gumi nguva imwe neimwe pane yekutanga-kuuya, yekutanga-yakapihwa hwaro (nguva yekupedzisira panongosvika kugona)
* Mberi kunyorera kunodiwa.
Ndokumbirawo unyore nefoni kana fakisi (TEL / FAX: 03-3772-0680 Ota Ward Ryuko Memorial Hall) yekushandisa uye kubvunza. Panyaya ye fax, ndapota nyora zuva raunoda uye nguva yekutora chikamu muhurukuro yegalari, zita (furigana), nhamba yefoni / yefakisi, uye nhamba inodiwa yevanhu (vanosvika vanhu vaviri).
* Ndokumbirawo upfeke mask, utachiona neminwe yako, uye ongorora hutano hwako sechiyero chekudzivirira kupararira kweiyo nyowani coronavirus hutachiona kana iwe uchipinda mumuseum.
Zuva racho rinogona kuchinjwa kana kukanzurwa zvichienderana nekupararira kwehutachiona.Uye zvakare, ndapota cherekedza kuti zita uye ruzivo rwekufonera rweanonyorera anogona kupihwa kumasangano eruzhinji senge nzvimbo dzehutano dzevanhu pazvinenge zvichidikanwa.
Mamiriro ekupedzisira nguva